Pane pane webhusaiti ye SEO checker online iyo inogona kundibatsira ne backlinks?
Pasi apa ndiri kuenda kukuudza kuti ungasarudza sei webhusaiti SEO checker online kuti udzivise chero zviitiko zvisingaiti. Ndiri kureva pano matambudziko anowanzoita nekuputsa mirayiridzo yeGoogle, iyo inogona kutungamirira pakurongedza zvikwereti kana kunyange kukwana kudarika-indexing yehurumende yese yechiremera. Chinhu chacho ndechokuti injini dzinotsvaga dziri kutitarisa kuti tione chero kudarika, manipulations, kana grey schemes yepamusoro webhusaiti yakarongwa muSERPs. Pakati pezvinonyanya kushandiswa, ndiko kusava nehuwandu hwehutano, pamwe nekuregererwa kusina kururama. Ndicho chikonzero icho chaizova pfungwa yakanyatsonaka yekugara uchiona nezvenzira yekugadzirwa kwehupenyu kwehuji hwewebhu rose. Kuita kudaro, iwe uchada kusarudza yakakodzera webhusaiti SEO checker online. Uye kune maturusi akawanda kwazvo akadai anowanikwa mukusvikirika. Saka, sei kuti uite chisarudzo chakanaka mushure mezvose?
Ngatitange nezvinodiwa kutarisa kwako kutanga uye kunyanya. Ndinokurudzira kuva nechokubatanidza-chengetedza pane zvikamu zvinotevera:
Nhoroondo yako yekuvaka chivako kwemwedzi mitatu
Kudzidza zvakadzama kweanchor links
) Zvinyorwa zvekudzokera shure kwako
Chengetedza chekuita kwemarudzi ose ehutano iwe
Saka, kudzivirira chero zvipi zveGoogle zvekuregererwa zvisina kururama, ndinokurudzira kuongorora webhusaiti ye SEO checker online kubva iyo inoshandiswa-inoshandiswa inyanzvi yekuongorora: Serpstat, Ahrefs, Majestic, kana Semalt Analyzer. Kana ini, ndinokurudzira kuongorora domain yako backlinks vhiki nevhiki, kana kamwe kamwe kwemavhiki maviri. Kushandisa chero webhusaiti SEO checker online Ndakambotaura kare zvingakubatsira iwe kugadzirisa nzira yacho nenzira inofambisa, inenge yakazara.
Kuita kuongororwa kumashure kunokonzerwa nekukurumidza uye nyore, ngationei maitiro akafanana ekuongorora kutora Retlink Analysis naSerpstat nokuda kwemuenzaniso wakawanda. Kuti tishandise zvakakosha zvose-zvakapoteredza kuongorora, tinongoda kushanyira peji yepamutemo yewebhu ye ino muganisi wekugadzira mupi. Kana tikangopinda muzita rezita redu iro rinoda kuongorora, tichapiwa mufananidzo wechidimbu pamusoro peziso rekfupi. Kutarisa kuburikidza nehuwandu hwehuwandu hwekuongorora, isu takatora semuenzaniso, tinogona kuongorora zvinotevera:
Nhoroondo yezvino, inobatanidza zvose zvinyorwa uye kuchinja, izvo yakaitika kuburikidza nenguva yakapera kusvika kumwedzi mitatu
Chidimbu chekutsvaga kwehutano hwakatendeka hunobva kumatunhu ekusimba kune simba guru kupfuura. edu kana. gov, inonyatsozivikanwa neGoogle pachayo, pamwe chete nezvose zvinotungamira injini dzekutsvaga, dzakadai seBing ne Yahoo
Nyaya dzakarongeka dzakanyatsogadzirisa zvangobva kuumbwa uye munguva pfupi yapfuura dzakarasikirwa, zvose kuti unyatsoteerera uye kuongorora, kusanganisira mazuva ehurukuro yavo
Yepamusoro pemaitiro emotokari paunenge uchitaura mazita emwedzi mishoma kusvika kumwedzi mitatu
Nhamba yakatarwa yeanchocho dzako, pamwe nehuwandu hwekuverenga
Kuongororwa kwechirongwa chewebsite yako yekugarisa kumashure, inofungidzirwa naSerpstat sechiratidzo chekutenda.
Nenzira iyo, tinogona kutarisira kunyange kushandiswa kwemashure ekudzorerwa shure newebsite yeSeO checker online kusatora kupfuura 10-15 maminitsi. Sezvandatozvitaura, zvinongova kwauri kuti usarudze nzira yekutsvaga backlink nechimwe chezvinhu izvi zvina zvakataurwa pakutanga. Kana ndiri ini, ndakawana nzvimbo yangu yepamusoro yekuongorora nzvimbo yepaIndaneti kushandisa shanduro yaSerpsat. Uye iwe unogonawo kuedza kushandisa Semalt Analyzer, nokuti kunyange zvakaderera dive mukati mekushanda kwako kwezuva nezuva Source .